GNU Taler 0.8 inouya nezvakasiyana zvinowedzeredzwa, rutsigiro rweIC Cat uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
GNU Taler 0.8 inouya nekuvandudzwa kwakawanda, rutsigiro rweIC Cat uye nezvimwe
Mazuva mashoma apfuura iyo GNU Project yakazivisa kuburitswa kwe iyo nyowani vhezheni yemahara yemagetsi kubhadhara system GNU Workshop 0.8 uye iyo vhezheni itsva zvishandiso zvakagadzirira shanduko kubvisa kushomeka kwakazivikanwa semhedzisiro yecodebase chengetedzo odhita. Kuongorora uku kwakaitwa mu2020 naCode Blau uye yakabhadharwa kuburikidza nemubhadharo kubva kuEuropean Commission pasi pechirongwa chekuvandudza kweinotevera-chizvarwa Internet matekinoroji.
Mushure mekuyedzwa, kurudziro dzakaitwa dzakanangana nekusimbisa yakavanzika kiyi yekuzviparadzanisa uye nerunyararo kupatsanurwa, kugadzirisa kodhi zvinyorwa, kurerutsa zvakaomarara kuvaka, kugadzirisa patsva nzira dzekubata NULL zvinongedzo, kutanga zvivakwa, uye kufona zvekare.
Kune avo vasingazivikanwe naTaler, vanofanirwa kuziva kuti system inovavarira kuitira kuti vatengi vaziviswe kusazivikanwa, asi vatengesi havazi kuzivikanwa kuti vaone kuve pachena mukubika mutero, kureva kuti, hurongwa haubvumidze ruzivo kuteverwa. mushandisi anoshandisa mari, asi anopa nzira yekutevera kutambira kwemari (iye anotumira anoramba asingazivikanwe), izvo zvinogadzirisa matambudziko anowanikwa muBitCoin neyekuongorora mutero.
GNU Taler haigadziri yayo cryptocurrency, asi inoshanda nemari iripo, kusanganisira madhora, euros, uye bitcoins.
Tsigiro yemari nyowani inogona kuve nechokwadi nekugadzira bhangi kuti iite seyemupi guarantor. Iyo GNU Taler bhizinesi modhi inoenderana nekuitiswa kwekushandurwa kwekushandisirana: mari kubva kune echinyakare ekubhadhara masisitimu akadai seBitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH uye SWIFT inoshandurwa kuita isingazivikanwe mari yemagetsi mune imwechete mari.
1 Main nyowani maficha eGNU Taler 0.8
2 Ungawana sei GNU Taler wallet?
Main nyowani maficha eGNU Taler 0.8
Mune iyi vhezheni itsva zvakavanzika kiyi yekuzviparadzanisa yakagadziridzwa, izvo zvino zvashandiswazve vachishandisa mafaera akapatsanurika taler-exchange-secmod- *, inomhanya pasi pemumwe mushandisi, iyo inokutendera iwe kupatsanura pfungwa kuti ushande nemabatirwo emakiyi tale-exchange-httpd inobata zvekunze zvikumbiro zvemambure.
Nguva iyo vhezheni yechikwama chakavakirwa paWebExtension tekinoroji, yakagadzirirwa kushandiswa mumabhurawuza, inowedzera rutsigiro rweGNU IceCat browser Uye zvakare, kodzero dzekuwana dzinodiwa mukushanda kweWebExtension-based wallet zvakadzikiswa zvakanyanya.
Iyo HTTP API yakagadziridzwa uye yakareruka kumisika pamwe nekureruka kwekumberi kwekugadzirwa kwemisika uye kugona kugadzira akagadzirira-kushandisa-mapeji eHTML ekushanda nechikwama akawedzerwa neiyo backend.
Zvekutsinhana mapoinzi uye mapuratifomu ekutengesa, iwo mukana unopihwa kutsanangura ako mazwi ebasaUye zvakare, zvekushandisa zvekuverenga maturusi zvakawedzerwa kune backend kuronga basa remapuratifomu ekutengesa.
Iyo F-Droid katarogu ine Android kunyorera kwecashier uye poindi yekutengesa mashandiro ayo anoshandiswa kuronga kutengesa mumakamuri ekutengesa.
Chibvumirano chinopa mukana wekuratidzira zvigunwe zvemufananidzo wechigadzirwa.
Wakawedzera rutsigiro rwekuchengetedza uye kudzoreredza kwechikwama kuita (Wallet-musimboti).
Dhizaini yekuratidzwa kweruzivo nezvekutengeserana, nhoroondo, zvikanganiso uye nekumirira mashandiro akagadziriswa muchikwama.
Kuitwa kwenzira yekudzorera yakagadziridzwa.
Kugadzikana kwechikwama kwakagadziridzwa uye kushandisika kwakagadziridzwa.
Chikwama API chakanyorwa uye chave kushandiswa munzvimbo dzese dzemushandisi.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni uye nezve iyo projekiti, unogona kutarisa ruzivo mune iyo inotevera chinongedzo.
Ungawana sei GNU Taler wallet?
Kune avo vako vanofarira kuwana iyo GNU Taler chikwama, iwe unogona kutanga kuedza demo reiyi system yemabhadharo kuziva zvishoma nezve kushanda kwayo.
Izvi zvinogona kuitwa kubva ku chinotevera chinongedzo.
Zvino kune avo vanoda kutora chikwama, vanofanirwa kuziva izvozvo zvinogoneka kubva pawebhusaiti kana nharembozha ine Android (sezvatakataura munhau dzeiyi vhezheni itsva).
Padivi remabhurawuza, parizvino chete Chrome neFirefox (uye mabhurawuza anoenderana neaya) ndeavo vane mukwanisi unogona kuiswa kubva kunotevera zvinongedzo.
Pakupedzisira kune avo vanoda kuisa chikwama chavo pane Android unogona kuwana iko kunyorera kubva ku inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » GNU Taler 0.8 inouya nekuvandudzwa kwakawanda, rutsigiro rweIC Cat uye nezvimwe
Chrome OS 93 inouya nekuvandudzwa muapp screen resizing uye nezvimwe